Sawirro Soomaaliya sanadka 2012 - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Sawirro Soomaaliya sanadka 2012
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 31 December, 2012, 21:45 GMT 00:45 SGA
Arday bishii November ka qalanjabisay Jaamacada Simad ee Muqdisho.
Arday ka qalanjabisay jaamacada Simad bishii November.
Kaluumaysatada Muqdisho oo madaxa ku sidata Kalluun ay suuqa xamar wayne gaynayaan.
Xeebta Liido oo ay ku dabaalanayaan dadka reer Muqdisho markii ay mudo dheer ay ka maqnaayeen dagaal awgii.
Xeebta Muqdisho oo laga furay Baar wax laga cuno lagana cabo.
Carruur kalllun ku wada dhabarka si ay u geeyaan suuqa. Kalluunka ayaa ka culus carruurta.
Madaxweynaha Somaaliya Xassan Sh. maxamud oo booqasho ku tagay Turkey markii ugu horaysay. Waxaa loo soo dhaweeyay si aad u wayn.
Madaxweynaha Somaaliya Xassan Sh. Maxamuud iyo Madaxweynaha Turkey Cabdallah Gul oo ku soo dhaweeyay Turkey
Ciidanka Amisom oo ilaalinaya Xeebta Muqdisho.
Askarta ciidamada Soomaaliya oo jooga Muqdisho.
Muuqaalka Muqdisho oo ku tusaya sida ay dadka barakacay iyo dadka guryaha leh isku ag dagan yihiin.
Dumarka Soomaaliyeed oo xusay December bilowgeedii ardaydii caafimaadka ee ku dhintay qaraxii ay Alshabaab ay ka samaysay xaflad dhaqaatiir ka qalanjabisay jaamacada Banaadir sanadkii 2009 bishii December.
Nolosha dadka barakacay ee Magaalada Muqdisho.
Askari ilaalinaya magaalada Kismaayo oo sanadkan laga bixiyay Alshabaab oo ay saldhig u ahayd.
Dadka reer Kismaayo oo ku harsanaya geed qumbe hoostiisa.
Dekadda Magaaladda Kismaayo.
Askarta Amisom oo magaalada Jowhar jooga kadib markii ay ka bixiyeen Alshabaab.
Ciidamada Soomaaliya oo ku nasanaya cagaarka iyo geedaha quruxda badan ee Jowhar.
Magaalada Marka oo laga sawiray hawada.